कांग्रेसबाटै पराजित कांग्रेस – bisalchautari.com
- २१ कार्तिक २०७२, शनिबार १५:०८ मा प्रकाशित
quote essay prompt biaxin for walking pneumonia enter https://zacharyelementary.org/presentation/dissertation-vs-thesis-paper/30/ deism essay priapism treatment viagra enter what doesabusiness plan writer do adolescent use of viagra essay and letter writing ebook follow url paradise lost essay titles https://scottsdaleartschool.org/checker/apa-citation-ma-thesis/33/ evalutaion essay pastilla cytotec funcionarios personal writer sites gb click flagyl cream uk follow url enter research paper on credit risk management https://heystamford.com/writing/custom-student-paper/8/ to autumn john keats analysis essay https://caberfaepeaks.com/school/help-with-titles-for-essays/27/ commentaire compos zadig de voltaire levitra take when https://georgehahn.com/playboy/cuando-utilizar-viagra/15/ macbeth book review essay example of proposal research https://www.arohaphilanthropies.org/heal/viagra-glen-lyn/96/ https://goodbelly.com/rxpack/consecuencias-de-utilizar-sildenafil/32/ Bhupendra Rai
– भूपेन्द्र राई, काठमाडौं
काठमाडौ, २०७२ कात्तिक २१ शनिबार ।
नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको परिणाम देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ। यस पटक पनि जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ। नेपालको ऐतिहासिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा पुन: यसपटक पनि प्रमाणित भएको छ भने परिवर्तित अवस्था र व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न इतिहासमा झैं कांग्रेस चुकेको छ। संविधान घोषणा हुँदाको बखत सबैभन्दा खुसी कांग्रेस कार्यकर्ता भएका थिए। गर्वसाथ संविधान निमार्णको श्रेय जिल्ला, गाउँ र टोलमा लिँदै थिए। तर कांग्रेस कार्यकर्ताको मुहारमा त्यो हाँसो र खुसी धेरै दिन रहन पाएन।
संविधान घोषणापछि नेपाली कांग्रेसले लिएको निर्णयले सबैभन्दा बढी कांग्रेसी कार्यकर्ताको मन दु:खेको छ। जनताले पटक—पटक निर्वाचित गरेको कांग्रेसलाई नेतृत्वले नै पराजित गराउँछ, किन? कार्यकर्ता र जनताले यतिबेला बुझ्न चाहेका छन्। कहिले मध्यावधि निर्वाचन गराएर त कहिले संकटकाल थप्ने बहानामा दरबारपरस्त भएर अनि आज आएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा सम्पूर्ण शासनसत्ता वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध गोली ठोक्नेलाई बुझाएर नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गरिएको छ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा अग्रणी मोर्चा सम्हाल्ने कार्यकर्ताहरू पार्टी सभापति सुशील कोइराला संसदमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैगर्दा सबैभन्दा बढी निराश भए। कांग्रेस कमजोर भएको ठान्दै थिए। उनीहरू भन्दै थिए– कांग्रेसलाई कांग्रेसकै सभासदहरूले भोट नहाल्दा पनि हुँदोरहेछ, हामीले जिताएर के गर्नु?
एकमतका लागि हामी अशक्त मतदाताहरूलाई डोकोमा बोकेर मतदान केन्द्रसम्म ल्याउँंछौं, तर माथि सभासद हराउँदा रहेछन्। कार्यकर्ताको चित्त बुझ्ने उत्तर कसले दिने? लोकतन्त्रमा हारजित स्वाभाविक हो। तर विजयलाई पराजयमा बदल्नु लोकतन्त्रको भावना विपरीत हो।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह भन्नुहुन्थ्यो, ‘स्वच्छ र इमानदार छवि बनाउन ३०/४० वर्ष खर्चनुपर्छ। तर भ्रष्ट र बेइमानीको छवि ३०/४० दिनमै बन्नेछ।’ तर कांग्रेसी नेतागणलाई गणेशमान सिंहको अर्ती कहिल्यै जायज लागेन। वर्षमा हैन, दिनमा प्राप्त हुने छवि बनाउन उद्यत छन्, कांग्रेसका नेतृत्व यतिबेला।
जनताले निर्वाचित गरेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल आज प्रतिपक्षमा पुगेको छ। यो रहर नभएर कांग्रेसको बाध्यता हो। संसदीय व्यवस्थाको दुर्भाग्य पनि हो। जनताको बीचमा मात्र हैन, संसदमा पनि कांग्रेस निरीह बन्दैछ, किन? जो चोर उसैको ठूलो स्वर भने जसरी रोष्ट्रमबाट कांग्रेसलाई भारत परस्तको आरोप लगाइरहँदा पनि त्यसलाई चिर्न सकिरहेका छैनन्।
साँच्चिकै कांग्रेस भारतको पिछलग्गु पार्टी हो? हैन भने कांग्रेसले रोष्ट्रमबाटै जवाफ दिन सक्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका केही नेता पार्टी अन्तैबाट चलेको रहेछ, भारतले कांग्रेसलाई फँसायो भनिरहेका छन्। यस बारेमा पार्टीमा छलफल हुन आवश्यक छ। कांग्रेसी मनहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखको चुनावमा पार्टी पराजित भएकाले वा पार्टी सरकारमा नगएको कारण निराश कदापि भएका होइनन्, उनीहरूको शिर झुकेको त भारत परस्तको आरोपले हो। कार्यकर्ताको शिर जबसम्म माथि उठ्दैन, तबसम्म कांग्रेस बलियो हुने सम्भावना क्षीण हुन्छ। यो कुरा कांग्रेसका नेतागणले बुझ्न आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि जस्तोसुकै शक्ति र सत्तासँंग नझुक्ने कांग्रेस लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन गर्न भने पूर्णरूपमा असफल भएको छ। पार्टी र देशलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुभन्दा आफू, परिवार र आफ्नो गुटलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाउँदाको परिणाम हो यो। कांग्रेसले जित्ने तर आफू पराजित हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्, कांग्रेसका नेतागण।
पार्टी सत्तामा हुने तर आफू वा परिवार नहुने सत्ताको अर्थ छैन, कांग्रेसमा। त्यसैले लोकतन्त्रको मुुटु ‘संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’को रूपमा चित्रण गर्ने कम्युनिष्टहरू, नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छैन भन्ने समूहदेखि देशको राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपतिको परिकल्पना पनि नभएको शब्दकोश बोक्ने शक्तिहरूको हातमा देशको शासनसत्ता पुगेको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नयाँ संविधानकै लागि खिल्ली र खतराको संकेत हो। यसबाट कांग्रेस सचेत हुनु आवश्यक छ।नेपाली कांग्रेसले यतिबेला नङ—नारी गलाएर हैन, आफ्नो जन्मकालदेखिको बल, बुद्धि लगाएर आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो संविधानमा कसैको सिद्धान्त पास भएको छ भने त्यो नेपाली कांग्रेसको मात्र छ। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको मर्म हो।
यसमा न प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ, नत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। यो संविधानमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ। जुन कुरा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र अनुसारै छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बाँडेको घोषणापत्रमध्ये अब नेपाली कांग्रेसको मात्र जीवित छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसैले नेपाली कांग्रेस संविधानको कार्यान्वयनमा अझ बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै कठिन काम हो। तर यसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षले सरलीकृत बनाउँदै लानुपर्छ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतामा अन्य पार्टीहरूलाई पनि सहमत गराउन सक्नु कांग्रेस नेतृत्वको कुसलता हो। तर आज त्यही कारण कांग्रेसविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। यो अपवित्र गठबन्धन सत्ताको लागिमात्र नहुन सक्छ। सत्ताको लागि आफ्ना मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तलाई परित्याग गर्न तयार हुने अहिलेको गठबन्धनबाट राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र संविधानको रक्षा धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनालाई कांग्रेसले बेलैमा नियाल्न सक्नुपर्छ।
संविधानमा आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै मधेसका नेपाली महिनौंदेखि आन्दोलनमा छन्। मधेसको जायज मागको नेतृत्व अब कांग्रेसले गर्दै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतका मागहरूलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्नका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा ल्याई चाँडो पास गराउन कांग्रेसले अग्रसरता लिनु जरुरी छ। सीमा क्षेत्रहरूमा मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेको आन्दोलनलाई संसदमा प्रवेश गराउँदै समाधान गर्नसक्नु नेपाली कांग्रेसको मुख्य दायित्व हो। यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित बनाउन मद्दत गर्छ।